आखिर को हुन त मनिष डाँगी ? तीन वर्षअघिको मनिषको पहिलाे अन्तर्वार्ता बाहिरियो, कोरियाको राष्ट्रिय टिममा समेत परेका थिए,आमाले रुँदै सुनाइन दुनियाँ रुवाउँने कहाँनी (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
आखिर को हुन त मनिष डाँगी ? तीन वर्षअघिको मनिषको पहिलाे अन्तर्वार्ता बाहिरियो, कोरियाको राष्ट्रिय टिममा समेत परेका थिए,आमाले रुँदै सुनाइन दुनियाँ रुवाउँने कहाँनी (भिडियो सहित)
ScotNepal October 6, 2021
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै नेपालको राष्ट्रिय टोलीले राम्रा खेल पस्कदै आएको छ । लामो समयदेखि लागेको गोलको खडेरी लाइ पछिल्लो समयका युवा पुस्ताले तोड्दै आएका छन । नेपालको खेल सधै राम्रो भएपनि स्कोर गर्ने खेलाडी नभएपछि पछि पर्दै आएको महसुस गर्न सकिन्थ्यो । नेपाली राष्ट्रिय टिममा बिस्तारै युवा पुस्ताको आगमनको बढेसँगै नेपाली फुटबल जगतमै केही आशा बढ्दै गएको छ । थोरै अवसर अनि थोरै लगानी र असुविधाका बाबजुद नेपाली खेलाडीहरुले ज्यान दिएर खेलेको देख्न सकिन्छ । पछिल्ला केही खेलहरुमा निकै सुधारिएको प्रदर्शन देखाएर सबैलाई चकित पारेको छ । केही समयअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नै गोल गर्न सफल भएका मनिष डाँगी जो नेपालको राष्ट्रिय टिमका भविष्यको रुपमा लिएका खेलाडी रहेका छन ।
भन्दै भइरहेको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले मौद्रिक सँग निकै रोमाञ्चक खेल खेलेको थियो । यस खेलमा नवयुग श्रेष्ठलाई आराम दिँदै दोस्रो हप्ता मैदान छिरेका मनिष डाँगीले 17 मिनेट मै उत्कृष्ट गोल गर्दै सबैलाई चकित बनाएका छन । छोटो समयमा निकै राम्रो छाप छोड्न सफल मनिष डाँगी आखिर को हुन् त ? आजभन्दा तीन वर्षअघि लिइएको मनिष डाँगीको पहिलो अन्तरवार्ता बाहिरिएको छ । मनिष डाँगी र उनकी आमा पहिलोपटक मिडियामा आउँदा छोराको भविष्य सम्झेर रोएकी थिइन । बुबाआमा सँगै कोरियामा हुर्किएका मनिष कोरियाको राष्ट्रिय टिममा समेत परेका थिए । समिर सुवेदीले लिएको सो अन्तर्वार्तामा मनिष कोरियाको राष्ट्रिय टिममा परेर पनि आफ्नै देशका लागि खेल्छु भनेर कोरियाको नागरिकता त्यागेर नेपाल आएको बताएका थिए । आमाले मनिषको दुनियाँ रुवाउँने कहाँनी सुनाउँदा सबैका आँखा रसाए । आमाले रुँदै यस्तोसम्म सुनाइन तलको भिडियोमा हेर्नुहोला ।